November 2012 ~ ကိုစောဂျက်
15:15 Ko Saw7comments
ပိုစ်မတင်ဖြစ်တာလဲ ကြာပြီး။ ပြောတဲ့သူတွေလည်း ပြောကုန်ပြီး။ ကိုစောဂျက် ဂန် သွားပြီးလာလို့ ... ပိုစ့်ကတော့ ပုံမှန်တင်ပေး ချင်ပါတယ်။ သိတဲ့ အတိုင်း အိမ်သာနက် လိုင်းမကောင်း ရင် ဘာမှ လုပ်လိုမရဘူးလေ.. ဒါကြောင့်ပါ။ ကဲကဲ ပြောနေကြာတယ်... windows7အမျိုးမျိုး ကို အလိုရှိသူများ အတွက် iso ဖိုင့်နဲ့ တစ်ဖိုင်ထဲ downloads ယူလိုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Windows7Home Premium with SP1 32-bit iso downloads
Windows7Home Premium with SP1 64-bit iso downloads
Windows7Ultimate with SP1 32-bit iso downloads
Windows7Ultimate with SP1 64-bit iso downloads
Windows7Professional with SP1 32-bit iso downloads
Windows7Professional with SP1 64-bit iso downloads
တစ်ခါထဲ ဝင်းဒိုတင်ပြီးရင် Activate ကိုဖြစ်အောင် အောက်ကကောင်းလေပါ မရှိသေးရင် downloads ဆွဲသွားလိုက်ပါ Activate Windows7downloads links ကဒီမှာပါ။
Driver Robot 2_5_4_0 နဲ့ Driver ရှာရအောင်
11:15 Ko Saw No comments
kopaul: ကိုစောေ၇ Driver Robot Softwareslinks သေကန်ပြီပြန်တင်ပေးပါအုံး ကျေး ဇူးတင် ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ခုမှပဲ ပြန်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ နောက်တောင်ကျနေပြီး။ windows xp တင်ပြီး ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် window7တင်ပြီးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် driver မစုံတဲ့ ဒုက္ခကတော့ အမြဲတမ်းဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါက Driver Robot Softwares ပါ။ နက်လိုင်းရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ လိုအပ်တယ်ထင်တဲ့ driver တွေကို ရှာပေးပါတယ်။ သုံးလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ key လည်း အထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ 7.MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
Driver Robot ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို အောက်မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
With Driver Robot, you never need to worry about installing an incorrect or out-of-date driver - Driver Robot's scan engine and database ensures you always get the latest official
driver. Driver Robot's massive database, perfect scan, and guaranteed driver availability means that you only have to press one button to Download All of the correct drivers for your system. Stop doing it the hard way - let Driver Robot update your system automatically.What's new in Driver Robot 2.5.4.2 ?